GADZIRISA YAKO PC INOZOTANGAZVE MUMINITI IMWECHETE CHIUNO - NYORO
Gadzirisa Yako PC inozotangazve muminiti imwechete chiuno
Kana iwe uri kutarisana nekanganiso meseji PC yako inozotangazve mumineti imwe, Windows yakapinda muchinetso uye inoda kutangazve, Iwe unofanirwa kuvhara iri meseji izvozvi uye chengetedza rako basa saka usazvidya moyo sezvo dzimwe nguva Windows inoratidza iyi yekukanganisa meseji. Kana iwe uri kutarisana nekanganiso iri pamusoro kamwe chete kana kaviri saka hapana nyaya uye haufanirwe kuita chero chinhu.
Asi kunyangwe mushure mekudzoserwa kwesystem, iwe zvakare unosangana nemessage yekukanganisa uye iyo system inotangazve saka izvi zvinoreva kuti wakanamatira mune isingagumi chiuno. Saka pasina kutambisa nguva tione Kuti toita sei Gadzirisa Yako PC inozotangazve muminiti imwechete chiuno nerubatsiro rwepazasi-yakanyorwa yekugadzirisa dambudziko.
Gadzirisa Yako PC inozotangazve muminiti imwe
Maitiro 1: Kwechinguva Dzora Antivirus uye Firewall
Maitiro 2: Delete Zvemukati meSoftwareDistribution folda
Maitiro 3: Ita otomatiki Kugadzirisa
Maitiro 4: Mhanya SFC uye DISM
Maitiro 5: Gadzirisa MBR
Maitiro 6: Ita Sisitimu Kudzorera
Maitiro 7: Dzorerazve kana Refresh Windows 10
Maitiro 8: Gadziridza Isa Windows 10
Kana iwe usingakwanise kuwana iyo Windows saka ungangoda iwe boot mumodhi yakachengeteka wobva watevera anotevera-akanyorwa matanho:
Dzimwe nguva chirongwa cheAntivirus chinogona kukonzeresa nyaya iripamusoro uye kuti uone kuti izvi hazvisizvo pano, unofanirwa kudzima antivirus yako kwenguva yakati rebei kuti ugone kutarisa kana iko kukanganisa kuchiri kuoneka kana antivirus yadzima.
1.Right-tinya pane iyo Antivirus Chirongwa icon kubva ku system tray uye sarudza Disable.
2.Next, sarudza iyo nguva iyo iyo iyo Antivirus icharamba yakaremara.
Ongorora: Sarudza iyo diki nguva ingabvira semuenzaniso maminetsi gumi nemashanu kana makumi matatu.
3.Kana waita, zvakare edza kutanga PC yako uye tarisa kana iko kukanganisa kunogadzirisa kana kwete.
4.Press Windows Key + R wobva wonyora kuzvidzora ndokurova Enter kuti uvhure Kudzora Panel.
5.Next, tinya System uye Chengetedzo.
6 wobva wadzvanya pa Windows Firewall.
7. Zvino kubva kuruboshwe hwindo pane tinya Dzorera kana kudzima Windows Firewall.
8. Sarudza Bvisa Windows Firewall uye wotangazve PC yako.
Zvekare edza kutanga PC yako uye uone kana uchikwanisa kugadzirisa iyo PC yako inozotangazve muminiti imwe yekukanganisa kukanganisa.
Windows inogadziridza zvakakosha sezvo ichipa ekuchengetedza ekuvandudzwa & zvigamba, inogadzirisa yakawanda mabegi uye inovandudza yako system mashandiro. SoftwareDistribution dhairekitori iri muWindows dhairekitori uye inotarisirwa ne WUAgent ( Windows Dzosera Agent ).
kuhwina gumi mapikicha app isiri kushanda
SoftwareDistribution dhairekitori rinofanira kusiiwa riri roga asi panouya nguva apo iwe ungangoda kujekesa zvirimo mune iyi folda. Imwe yenyaya dzakadai ndeye apo iwe pausingakwanise kugadzirisa Windows kana kana Windows inogadziridza iyo anotorwa & akachengetwa muSoftwareDistribution folda yakashata kana isina kukwana. Vazhinji vashandisi vakashuma izvozvo kubvisa zvirimo muSoftDistribution Dhairekitori yakavabatsira kugadzirisa iyo PC yako inozotangazve muminiti imwe yekukanganisa kukanganisa.
1.Pinza iyo Windows 10 bootable yekuisa DVD uye tangazve PC yako.
2.When paunokurudzirwa Kumanikidza chero kiyi kubhuti kubva kuCD kana DVD, tinya chero kiyi kuti uenderere mberi.
Sarudza mutauro wako zvaunofarira, wobva wadzvanya Next. Dzvanya Kugadzirisa komputa yako pasi-kuruboshwe.
4.On sarudza sarudzo screen, tinya Dambudziko .
5.Pa Troubleshoot skrini, tinya Yepamberi sarudzo .
shandisa usb drive segondohwe
6.Pamusoro peSarudzo dzakapfuura chinyorwa, tinya Otomatiki Kugadzirisa kana Kutanga Kugadzira .
7. Mirira kusvika Windows otomatiki / Kutanga Kugadzirisa zadzisa.
8.Restart uye iwe vakabudirira Gadzirisa Yako PC inozotangazve muminiti imwe yekukanganisa kukanganisa.
Kana yako system ikapindura iyo otomatiki Kugadziridza ipapo inokupa iwe sarudzo yekutangazve iyo Sisitimu neimwe nzira icharatidza kuti otomatiki Kugadzirisa kwakundikana kugadzirisa nyaya. Muchiitiko ichocho, iwe unofanirwa kutevedzera uyu gwara: Maitiro ekugadzirisa otomatiki Kugadzirisa akatadza kugadzirisa PC yako
3. Mirira kuti pamusoro maitiro apedze uye kana wapedza watangidza PC yako.
Ongorora: Tsiva iyo C: RepairSourceWindows nenzvimbo yekugadzirisa kwako ( Windows Kuisirwa kana Kudzoreredza Disc).
7.Reboot PC yako kuchengetedza shanduko.
Master Boot Record inozivikanwa zvakare seMaster Partition Tafura inova inonyanya kukosha chikamu chedhiraivhi iyo iri pakutanga kwekutyaira iyo inoratidza nzvimbo yeOS uye inobvumira Windows 10 kubhoot. Iyo MBR ine bhuti inorodha umo iyo sisitimu yekushandisa yakaiswa pamwe nemudhudhudhu zvine musoro zvikamu. Kana Windows isingakwanise kubhuya saka ungangoda iwe gadzirisa kana gadzirisa yako Master Boot Record (MBR) , sezvo zvingave zvakashatiswa.
1. Vhura Kutanga kana kudzvanya Windows Key.
2.Type Dzosa pasi peWindows Tsvaga uye tinya pa Gadzira yekudzorera poindi .
3. Sarudza iyo Dziviriro yeSystem tab uye tinya pane iyo System Dzorera bhatani.
4.Dzvanya Inotevera uye sarudza chaunoda Sisitimu Dzorera poindi .
4.Tevera iyo pa - screen kuraira kuti upedze iyo System Dzorera .
5.After reboot, zvekare tarisa kana uchikwanisa gadzirisa Yako PC inozozvigadziridza yega muminiti imwe kukanganisa.
Ongorora: Kana iwe usingakwanise kuwana PC yako wozotangazve PC yako kakati wandei kusvikira watanga Otomatiki Repair kana shandisa gwaro iri kuwana Yepamberi Kutanga sarudzo . Wobva waenda ku Troubleshoot> Dzorerazve iyi PC> Bvisa zvese.
1.Pinda Windows Kiyi + ini kuvhura Zvirongwa wobva wadzvanya pairi Kwidziridzo & Chengetedzo icon.
2.Kubva kuruboshwe-menyu sarudza Kudzorera.
3.Zasi Dzorerazve iyi PC tinya pane iyo Tanga bhatani.
4.Sarudza sarudzo ku Chengeta mafaera angu .
5.Ne inotevera nhanho iwe ungakumbirwa kuisa Windows 10 yekuisa midhiya, saka ive shuwa kuti iwe wagadzirira.
6. Zvino, sarudza yako vhezheni yeWindows uye tinya pane chete drive uko Windows yakaiswa > Ingobvisa mafaera angu.
yekuwedzera yekuvandudza ye windows 10 vhezheni 1803 yakundikana
7.Dzvanya pane iyo Dzorera bhatani.
8.Tevera mirairo pahwindo kuti upedze kugadzirisazve.
Iyi nzira ndiyo yekupedzisira tarisiro nekuti kana pasina chinoshanda ipapo nzira iyi inonyatso gadzirisa matambudziko ese nePC yako uye kuda gadzirisa iyo PC yako inozotangazve muminiti imwe kukanganisa. Kugadzirisa Kuisa kunongoshandisa in-nzvimbo yekuvandudza kugadzirisa nyaya nehurongwa pasina kudzima mushandisi data iripo pane ino sisitimu. Saka tevera ichi chinyorwa kuti uone Maitiro Ekugadzirisa Kuisa Windows 10 Nyore.
Ndinovimba matanho ari pamusoro apa akakwanisa kukubatsira Gadzirisa Yako PC inozotangazve muminiti imwechete chiuno asi kana uchiri nemibvunzo ine chekuita negwara iri unzwe wakasununguka kuvabvunza muchikamu chekutaura.
kumisikidza ftp pamawindows 10
input haina kutsigirwa windows 7
yako windows rezinesi ichapera munguva pfupi kmspico
windows 10 mutyairi akapfuura stack stack
macabo anoramba achivhura mu chrome